သံမဏိတံတားစီမံကိန်းအတွက် ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ သဘောတူညီချက် AIIB နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး - Xinhua News Agency
သံမဏိတံတားစီမံကိန်းအတွက် ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ သဘောတူညီချက် AIIB နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး
ဒါကာ၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် အာရှ အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် (AIIB) တို့သည် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ခုံးအကွေးပုံစံ သံမဏိပေါင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ တန်ဖိုးရှိသော ချေးငွေအား မကြာသေးမီက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဒါကာမှ စီးပွားဆက်ဆံရေးဌာန အတွင်းဝန် Fatima Yasmin နှင့် ပေကျင်းမှ AIIB (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဒေသ-၁) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ DJ Pandian တို့က အွန်လိုင်းအခမ်းအနား၌ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များကိုယ်စား သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
စီမံကိန်းအရ မီတာ ၃၂၀ ရှိသော သံမဏိပေါင်းကူးတံတားတစ်စင်း၊ မီတာ ၇၈၀ ရှိသော ချဉ်းကပ်တံတားတစ်စင်း၊ ၅၅၁ မီတာရှိသော မိုးပျံတံတားတစ်စင်း၊ မီတာ ၂၄၀ ရှိသော ရထားလမ်းခုံးကျော်တံတားတစ်စင်း၊ အနှေးယာဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်သောလမ်းများ အပါအဝင် ၆.၂၀ ကီလိုမီတာရှိသော လေးလမ်းသွား အဝေးပြေးလမ်းနှင့် ယာဉ်ဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးစခန်းတစ်ခုတို့အား ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လမတိုင်မီ ပြီးစီးရန် လျာထားကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်၍ Kewatkhali တံတားသည် ရှုပ်ထွေးသောမြို့လယ်နေရာမှ ယာဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ Mymensingh မြို့ရှိ လမ်းပိတ်ဆို့မှုကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပေကျင်း အခြေစိုက် ချေးငွေထုတ်ပေးသူဘဏ်က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
ထို့ပြင် တံတားအသစ်သည် ပြည်တွင်းနှင့် ဒေသတွင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာကျကျ အရေးပါသော ဒါကာ-Mymensingh-အိန္ဒိယ နယ်စပ်စင်္ကြံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
တံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူ ၁၁ သန်းကျော်အား ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနှင့် ဒေသခံနှင့် ဒေသတွင်းဈေးကွက်များ၏ ပေါင်းစည်းမှုကို မြှင့်တင်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း AIIB ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ထို့ပြင် ၎င်းတံတားသည် ပြည်သူများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ခရီးသွားလာချိန်အား တိုတောင်းစေမည်ဖြစ်သလို ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ရေးကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
AIIB, Bangladesh ink 260 mln USD loan pact for steel bridge project
DHAKA, Nov.3(Xinhua) — Bangladesh and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) have signeda260-million-U.S. dollar loan to Bangladesh for the construction of the country’s first arch steel bridge recently.
Economic Relations Division Secretary Fatima Yasmin from Dhaka, and AIIB Vice President (Investment Operations Region-1) DJ Pandian from Beijing signed the agreement on behalf of their respective sides atavirtual ceremony, saidastatement received here Wednesday.
Under the project, according to the Finance Ministry statement,a320-metre steel arch bridge, 780-metre approach bridge, 551-metre road overpass, 240-metre railway overpass, 6.20-km highway with four lanes, including slow-moving vehicular traffic lanes and one toll plaza are scheduled to be completed by June 2025.
The Kewatkhali Bridge upon completion will ease congestion in the northern city of Mymensingh by diverting traffic from the busy city center, the Beijing-based lender had earlier said inastatement.
Moreover, it said the new bridge will be part of the Dhaka-Mymensingh-India border corridor, which is strategically important for local and regional connectivity.
Once completed, according to AIIB, over 11 million people in Bangladesh’s northern region will benefit from increased mobility and integration of local and regional markets.
The bridge will also shorten the travel time for people and vehicles, and contribute to the reduction of carbon emissions, it said. Enditem
အီရန်ရေနံကို ခိုးယူရန် အမေရိကန်ရေတပ်၏ ကြံစည်ကြိုးပမ်းမှုအား အီရန်က တားဆီးနိုင်ခဲ့
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၌ ၂၁ ထပ် အဆောက်အဦပြိုကျမှုအတွင်း သေဆုံးသူ ၆ ဦးထက်မြင့်တက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ခရီးသည်တင်ရေယာဉ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၈ ဦးအထိမြင့်တက်
တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး စွန့်ပစ်အမှိုက်မှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည်